GarageBand: software yandingade kushandisa paLinux uye haipo | Linux Vakapindwa muropa
Inenge mwedzi miviri yapfuura, ndichitaura nezve "kutamba" kwangu nemumhanzi zvakare, ndakanyora chinyorwa pa Hydrogen, muchina wedhiramu wandanga ndisiri kunyepa nezvangu pandakati ndauwana uchifadza. Kana iye anga asiri kunyepa paakataura kuti «Apple iri pamusoro pevamwe kana zvasvika mukugadzira, kugadzirisa kana kusanganisa mimhanzi«, Uye mune kesi yeLinux mutsauko unotonyanya kukura. Ndoziva kuti ndinogona kuwana kushoropodzwa kubva kune vanonyanyisa pakunyora ichi chinyorwa, asi, zvinosuruvarisa, vashandisi veLinux havana chakaenzana Garageband.
Iyi posvo haisi yekutaura zvakanaka nezveApple, kunyange ini ndichazviitawo, asi kune vese avo veLinux vanoshanda navo, kunyangwe mablog, vanoti Audacity kana Ardor yakafanana neiyo GarageBand iyo yandakashandisa kweanopfuura makore gumi. Zvakanaka, zviri nyore, zvichava kwete. Tevere ini ndichataura software yavanonyanya kufananidza neApple DAW, kutaura kuti sei vasina kufanana uye kuyedza kugadzirisa kamwechete uye kweizvi zvese izvo, semuimbi wekuimba, ini handina kumbonzwisisa.
1 Tinogona kuzviita tese tisinga siya GarageBand. Iine 'dzimwe nzira', kwete
2 Mubvunzo: wakasununguka, unonzwisisika uye zvese mune imwechete
3 "Chinja pfungwa dzangu"
Tinogona kuzviita tese tisinga siya GarageBand. Iine 'dzimwe nzira', kwete
Ngatitangei nekutaura nezve Audacity. Iyo yemahara, ine akawanda mhedzisiro, uye iwe unogona kunyange kugadzirisa MIDI, asi zvakadiniko nezve zvishwe zvako? Ko zvakadii nezvegitare rako? Tiri kuenzanisa MIDI mupepeti neApple's? Ini handizive kana kuseka kana kuchema, pamwe nekuda kwekuti imwe inonzwika sei uye imwe inonzwika sei uye pamwe nekuda kwekuti yakapusa sei mune imwe uye imwe yakaoma sei. Kwete, Audacity haisi GarageBand.
Isu tinoenderera nesoftware senge Ardor uye Reaper. Mune dzidziso, hapana kana mumwe wavo akasununguka, kunyangwe muLinux ini handina kumbosangana nemipimo. GarageBand anga akasununguka kwemakore manomwe kusvika masere paunotenga Mac / iPhone / iPad. Ose anotibvumidza kunyora uye kugadzirisa uye anotaridzika zvirinani kupfuura Audacity, asi kukanganisa kumwe chete. Dzinogona kushandiswa pamapurojekiti akareruka, asi kwete kana tichida kuwedzera nekugadzirisa maMODI matiki neakanyanya kurira.
Vamwe venyu vangave muchifunga «LMMS. Hongu, kwete? ». Zvimwe. LMMS ndeye sarudzo yakanaka kune uyo anoda kusanganisa, asi kutanga, iwe unofanirwa kutsvaga hupenyu hwako kuti uwane masampuli, zvishwe zvichingodaro. Kune rimwe divi, wawana here bhatani rekunyora? Kunyangwe neni. Nekudaro, kunyange iine dhizaini yakanaka kwazvo, kana isingashande kurekodha nekugadzirisa mafungu, ayo kunyangwe iyo yekupedzisira ichigona, haina kunyatsoita, haina kufananidzwa neGarageBand.
Ehe, izvo software inotarisa pa MIDI haina kufanana kuGarageBand, uye pano tinogona kutaura Rosegarden. Apple software yakanyanya kuwanda.
Mubvunzo: wakasununguka, unonzwisisika uye zvese mune imwechete
Hapana munhu anozvinzwa kupfuura ini. IMac yangu iri kubva muna2009 uye handizive kana ndichazombova neimwe ichingofunga mimhanzi. Ini ndinonyanya kushandisa Linux izvozvi, uye handigoni kana kusvika padyo nezvinoitwa neGarageBand. Muchokwadi, iyo iPad / iPhone vhezheni yatove nechimwe chinhu chakakosha icho iyo Linux software haina iyo: iyo raibhurari ine mutsindo uye yakapusa kushandisa MIDI mupepeti watinokwanisa kugadzirisa magitare, mabhasi, makhibhodi, pianos, kurira kwemhepo, tambo kurira, nezvimwe, uye kurira kune hutsinye. Kunyanya kutaurwa nezve madhiramu, kuti ini ndinemuchina wakanaka kwazvo wedhiramu uye ini handidi nekuti zviri nyore kwandiri kushandisa iyo iPad mupepeti.
Kuenderera mberi nengoma, kune «Vanoridza ngoma», ayo ari madhiramu anozoridza sezvatiri kuratidza, ese achivandudza. Ndeapi maLinux software ane vanodhakwa vane? Uye ndeyekuti neiyo imwe GarageBand isu tinayo (kana kusvika kune izvo zvainotipa, isu tinoda):
Ardor kana Reaper. Nema sequencers aya zvinogona "nyore" kukwidza uye kudzikisa vhoriyamu netambo, uye kuvaudza kwekutamba (kunyangwe ini ndisina chokwadi nezve yekupedzisira).
Rosegarden kana LMMS. Nezvirongwa izvi taigona kugadzirisa MIDI, asi ruzha harunei nezve izvo zvinopihwa neApple, zvinoita kunge zvechokwadi.
Audacity. Kana isu tichida kusanganisa uye kuita zvakanyorwa uye MIDI kurira zvakanaka, pamwe tinoda Audacity kusanganisa zvese, kana kutumira MIDI kuWAV uye kuiisa muArdor / Reaper. Hongu tinogona kuzvida kuti tiwedzere zvimwe zvinoitika kumafungu.
Hydrogen. Ini ndinoda uyu dhiramu muchina, asi ruzha runosiyawo zvakawanda kuti zvidikanwe. Chinhu chakanaka ndechekuti iwe unogona kuwana kits ... kana iwe ukavatsvaga.
"Chinja pfungwa dzangu"
Asi hesi, ini handisi mudzvanyiriri mukomana anofunga kuti anoziva zvese nezve zvese, kure nazvo. Ini ndinogona kukanganisa, uye pamwe iwe unoziva software yeLinux inosvika padyo kana kutorova GarageBand. Saka ndinopedzisa chinyorwa ichi ndichivimba kuti iwe uchandiudza kuti handisi chokwadi uye nei. Uye kana ndine rombo rakanaka, ndiudze imwe nzira yakanaka, iyo, nemoyo wese, ndingafarire.
Zvinofanira kuva sei? Zvakanaka, sekutsanangura kwandakaita:
Sequencer iyo inondibvumidza ini kurekodha, kukwidza uye kudzikisa vhoriyamu, fambisa iyo parutivi iyo icharira, gadzirisa mafungu uye wedzera mhedzisiro kwavari.
Yakazara nemhedzisiro yeodhiyo, kana ichigona nemagitare (kunyangwe chiri chokwadi kuti ini handichidi, asi inogona kuuya zvinobatsira kugadzirisa ruzha rwakasarudzwa zvisirizvo).
Yakanaka MIDI mupepeti iyo isingatambise nguva yangu, saka nyore kugadzirisa senge Hydrogen ine madhiramu, asi zvakare nezvimwe zviridzwa. Uye neruzha rwakanaka.
Zvishwe uye mhedzisiro yekuita nziyo mune imwe nguva uye kuti YouTube haina kundibvunza kodzero dzekopirita, kana kungofara.
Ita kuti ive intuitive, ndinodzokorora kuti handifarire kutambisa nguva.
Nezviri pamusoro izvi ndinofunga ndaizogadzikana. Pasina kukanganwa kuti iyo kudzidza curve hakuna kunaka, Unoziva chimwe chinhu chakadai?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Netsoka dzako pasi: zvakakwana kutaura kuti Linux yakakwana, zvirinani kumimhanzi, uye ngatiregei kutaura GarageBand zvakare
Ini ndinofunga zvakafanana. Ini handisi mushandisi wemagetsi uye ini ndinongova neanozvininipisa imba studio. Ini ndakapa Ardor mukana uye haitombosvika padyo neizvo Reaper iri (Kutaura nezvechimwe chinhu chakakosha senge kurekodha mhando uchishandisa iwo mabheti, hz uye marongero). Ini handina kumbobvira ndawana kugona kushandisa GarageBand.
Ndinoonga kuyedza kwesoftware yemahara yekugadzira mimhanzi, asi ichiri kushomeka kukura.
Chokwadi, ndiwo mubvunzo. Tinogona kutenda nekutaura kuti software inoita basa rayo nemazvo, asi tichiienzanisa neimwe yakaita seGarageBand, kuti kuti uishandise unofanirwa kushandisa mari inopfuura € 1000 kunyangwe kana software iri yemahara, chinhu chatisingafanirwe kuita.
Kuti unzwisise kuti chii GarageBand, unofanirwa kuishandisa. Paunoona kuti iwe unogadziridza mafungu zvakanyanya kupusa, kuti maruzha acho anonzwika zvirinani, paunoona kuti anoridza ngoma ari ega uye zvese zvaanopa, zvinobva zvabuda mumusoro mako kuti zvinogona kufananidzwa.
Izvo zvinouyawo mupfungwa dzangu kuenzanisa Tux Guitar neGuitar Pro.Hongu, ndinoshandisa Tux Guitar, asi Guitar Pro yakanyatso kukwana, uye manzwi acho ndechimwe chinhu. Uye isu tiri kutaura nezve kugadzira mimhanzi: kana maungira asingaite kunge echokwadi, isu tinoita zvishoma.
apuro yakaora akadaro
Apple iSanta M mune zvese, muLinux mune zvirinani software uye nekuwedzera nekuwedzera, iri kutotora Apple mune graphic dhizaini, iyo yaive isingazivikanwe mambokadzi, vanhu vazhinji vakachinja kubva kuApple kuenda kuLinux kune graphic dhizaini nyaya. , kuvaka, kudhirowa, mitsara yekugadzira, nezvimwe. Chimwe chinhu ndechekuti iwe uri fan weApple uye unouya kuno uchiverenga akawanda mamilongas, icho chimwe chinhu chakanyanya.
Ndiudze kuti ndeapi software iri nani kune odhiyo paLinux. Ndakamirira kuti iwe undiudze chete imwe. Uye ini ndichaita kuti zvive nyore kwauri. Ngatiregei kutaura nezve GarageBand. Ngatiisei vhezheni iyo Steinberg Cubase yaanopa nezvimwe zviridzwa
Icho chinhu chandanga ndichitaura kwemakore. Kubvisa kukuru kweLinux ndiko mushandisi wepakati. Iye uyo anoda mamwe maficha, asi haakwanise kubhadhara mugadziri kuti avarongedze.
Neraki, iro gore uye maChannelbook ari kuzoita mashandiro esisitimu.
Uye nenzira. MuLinux hapana chinouya padhuze naAbby Finereader
Iwe unoratidzika kunge usiri mukati "chaiye" maDAWs sezvo iwe uchida chimwe chinhu kutsiva GarageBand uye kuwedzera, kuita kuti zvinhu zviwedzere, "Apple iri pamusoro pevamwe kana zvasvika kune software yemumhanzi". Ikoko iwe wakasvetuka nenzira yakaipa. Apple HAIYE DZIMWE DAW iyo iri yepasi nyanzvi, iwo mamwe aunoita kunge hauzive kana aripo: Cubase, Reaper, Ableton, Pro Zvishandiso, Bitwig uye mamwe andinokanganwa. Pasina mubvunzo kutaura, ini ndangotaura zviri kumusoro uye zvinongoitika pasina kutaura kuti hapana chimwe chazvo chinobva kuApple.
Pindura kuna elchampi
Asi wakamboona here kuti ini ndotaura kuti mahara? Ini ndinoziva iwo mapurogiramu, asi iwo anobhadharwa uye haana kunyatso nzwisisa. Ndinoita kuti zvive nyore kwauri: ini handina kukwirira zvakanyanya kana kuva neruzivo uye zvakadaro ini ndinoita mimhanzi nekukurumidza uye yemahara neGarageBand. Naizvozvo, iwe uri kubvumirana neni.
Logic Pro inobva kuApple, uye pano vanoiisa padanho rakaenzana nePro Zvishandiso: https://guitarspace.org/tips/logic-pro-vs-pro-tools/
Pano, uyo anorova Ableton: https://www.musicgateway.com/blog/how-to/ableton-vs-logic-pro-x
Kune rimwe divi, kana izvo zvinopihwa neApple zvakanyanyisa, nei vazhinji varidzi vezwi vachishandisa Apple zvishandiso? VaDj, semuenzaniso, pese pandinoona munhu anotora komputa, iri MacBook. Iye asingashandisi anowanzo taura izvi:
Na Apple zvinoitikawo, asi zvishoma. Saka chirevo ichocho. Asi hongu, ndinofanira kukupa iwe chikamu chechikonzero: hazvisi chete nekuda kwemusoft software. Izvo ndezvese zvinhu.
Uye, kana iwe usati wanzwa, iwo akaparadzaniswa chirevo, icho chandinoona chiri chakakodzera nekuda kwekombi, icho chinyorwa chiri pamusoro pacho kuramba kuti pane chero chinhu cheLinux chinosvika padyo nacho, sekuverenga kwandaita mune dzakawanda midhiya nezve Linux. Kune akawanda zvinyorwa anoti Audacity kana Ardor dzimwe nzira dzeGarageBand, uye ivo havatombori. Ivo vane Mac vane yemahara software iyo inoshandiswa mune dzakawanda kesi uye ini ndinofunga inoiswa ne default. Muchidimbu, hakusi kukumbira ruregerero kweApple, asi asi "kurwisa" kune avo vanoti izvo zviri muLinux zvakafanana. Uye zvakare kufona, kana maviri: mumwe munhu kukurudzira chinhu chakanakira Linux kana kuti ivo vanogadzira vanogadziridza izvo zvavanazvo, asi ini ndinofunga hazvigoneke nekuda kwemari. Zvese zvaunotaura zvakakosha zvakakosha kwazvo. Yakachipa pane Apple, asi kuti ugone kuishandisa iwe unoda komputa ine mhando yakachipa iri pamusoro pe € 1000. Ini ndinotaura izvi nekuti iwo mapurogiramu anogadzirwa nevanhu vanobhadharisa mari yakawanda, kwete nharaunda, uye ndiro dambudziko guru.
Chokwadi. Logic Pro haina basa zvekuti inoshandiswa nenhamba zhinji dzekurekodha, neGarageBand iri pfupi pfupi yeLogic yemahara. Cubase, Reaper, Ableton haisi yemahara (pane akachekererwa vhezheni ayo ari meh) uye haana kujeka kune musiri-nyanzvi mushandisi uye haapo muLinux kunze kweKunhonga. Uye zvechokwadi, hapana chimwe chazvo chinouya chero padhuze nemapulagini senge iwo anounzwa neGrageBand nekutadza.
System Anoshanda akadaro
Chinyorwa chako chakanaka, asi iwe unofanirwa kuchinja iwo musoro wenyaya. "Netsoka dzako pasi: zvakakwana kutaura kuti Linux yakakwana."
Yako inoshanda sisitimu haina chekuita nekuti iwe kana kwete iwe unogona kuita izvo zvinhu zvaunoita neakananga Apple software. Dai dambudziko raive rakaipa dhiraivha madhiraivha, latency mune yeI / O tsime, ini ndichiri kuitenga.
Pindura kuSystem Operator
Kune zvakare matambudziko mune izvo. Kana imwe software ikashandisa imwe odhiyo server uye imwe ichishandisa imwe, dzimwe nguva haitombo kurira panguva imwe chete. Ndicho chikonzero nei ndakachinjira kuMac, uye kuti ndiite Rosegarden kurira unofanirwa kuisa mamwe mapakeji, ese paManjaro uye paKubuntu. "Kunze kwebhokisi" hakutombonzwika. Dambudziko iri ndereLinux, huzivi hwayo hwekusununguka kwemahara uye kuti munhu wese anokura se, nekuda kwezvavanoda. MuWindows uye macOS handisati ndamboona "chirongwa chisina maturo" senge muLinux.
Sezvandakaverenga mune yakapfuura chirevo. Hapana munhu anofunga nezvemushandisi wezasi.
Sezvaunotaura, Reaper kana Ardor uzviise seimwe nzira, asi iri imwe nzira zvimwe kune zvishandiso zvepro, cubase uye zvimwe. Mairi iwe unofanirwa kushandisa plug-ins uye tarisa kune chimwe chinhu chineruzivo.
Ndanga ndiine ubuntu studio kwemwedzi ndichiyedza zvirongwa zvayinounza, uye hapana kana chimwe chazvo chinondisimbisa.
Asi pakupedzisira, chinyorwa chako ipfungwa yekutanga. Uye tinotarisira kuti vagadziri vatoverenga! hahaha kwaziso.
Dambudziko harisisiri vagadziri, asi mari. Ini ndinotaura izvi mune kumwe kutaura, kuti software iyo yakakodzera kubhadhara inobhadharwa, kana iyo GarageBand iyo yemahara kana iwe ukatenga komputa kubva kwavari. Saka, ingave Apple kana chero mugadziri, ivo vanoita mari yakawanda, kuti vagone kukura zvirinani uye nekukurumidza.
Semuenzaniso, apa vataura nezveBitwig, iri zvakare yeLinux, asi yakakosha ingangoita € 400 uye mune yeiyedzo vhezheni, iyo inoti inongovharira chete kuchengetedza chirongwa kana kuiburitsa kunze, haina kana kuratidza mabhatani ekuchengetedza . Saka pano isu tichava nedambudziko rimwe kana anopfuura: haina kutsigirwa zvakafanana kuLinux? Zvakanaka, haisi sarudzo. Icho chinetso chemhando yepakeji here? Iri dambudziko reLinux. Iwe unofanirwa kudzidza kuti uite iwo mabhatani aoneke? Zvinoita kunge zvisingaite kwandiri. Zvandakawana, ndichizviisa neimwe package (AUR), asi iyo MIDI haina kurira. LMMS inoita, asi LMMS haibvumiri iwe kugadzirisa mafungu.
MuLinux zvinoita sekunge pasina chinhu chinoita zvese uye mushe, uye ndicho chikonzero nei ndakanyora chinyorwa ichi, nekuti ini ndaverenga kuenzanisa kwakawanda neGarageBand uye ndinofunga kuti hapana munhu anotaura nezvayo akambozviedza, nekuti uchienzanisa ne Audacity kana MuSe, ndeyekuti ndinoona zvisingaiti. Zvinotaridza kuti vanotenda kuti GarageBand chirongwa chekusanganisa mafaera ekuteerera uye haisi.
Ndinovimba izvo zvaunotaura zvichaitika uye, semuenzaniso, LMMS inowedzera sarudzo yekurekodha nekugadzirisa mafungu, kana Ardor inovandudza mhariri yayo yeMIDI. Kana pakupedzisira, zvinoita sekunge ini handibvunze zvakanyanya.
Ini ndinogona kukupa iwe chikonzero mune zvese zvinhu, asi iwe une chikanganiso chakakura kwazvo ... uye chikuru, uye ndizvozvo kuti iri harisi dambudziko relinux ... nekuti ini zvino ndinokubvunza unenge mubvunzo mumwe chete ... ndiudze yemahara windows software uye inofananidzwa neGarage Band ... Ndiri kukuudza ... hapana. Saka zvaunoisa pano sedambudziko re linux, haisi linux, asi sekutaura kwavakaita kare, idambudziko remitemo yeApple, iyo inoita kuti software iite nemahara maficha, kupa mhando yemimhanzi rutsigiro kune vashandisi veamateur, asi nzira… Yakavharirwa kune yako sisitimu. Uye pakupedzisira, katsamba kune avo vanotaura vasingazive ... uye tinoziva kuti hauzive, nekuti kana wakamboshandisa garaji bhendi, haugone kutaura zvisina maturo zvaunoti ... kunyangwe zvakaoma sei kutenda iyo, hapana chakafanana nayo uye haugone kuva nacho ... kana chisipo mumawindo ... ichave sei mu linux? Iine zvinhu zvakawanda zvisingagone kuitwa nemamwe mapurogiramu kana zvirinyore nehunhu uye mhando, ini ndinongoshandisa iyo ngoma ... asi ndeyekuti muhafu yeawa ndinoita madhiramu edhimo, uye kana ini plug mu gitare zvinonzwika zvakanaka uye kana ndikasarudza chiridzwa cheJapan chandaisatomboziva kuti chiripo, inogadzira rwiyo rwekuimba nezve rwiyo rwangu munguva chaiyo… zvakare kana usati waishandisa, usataure chero chinhu … Unoratidzika kunge usina musoro uye zvinoratidza kuti hauna kuzvishandisa. Muchidimbu, hapana chinhu senge garaji bhendi kana mu linux kana mumawindo, kana zvingamboitika, asi chero zvazviri hazvigone kutaurwa kuti ndezvemahara kana zvichidikanwa kutenga chikuva chevaridzi kuti chimhanye.
Mhoro Julio. Ini ndakanangisa chinyorwa paLinux uye kuramba kuenzanisa kwevamwe. Windows haina kuzvitaura, kunze kwekungoti "muLinux mutsauko wakanyanya kukura." Ichokwadi kuti muWindows chinenge zvese zvakanaka zvinobhadharwa, asi kune zvekare zvimwe zvakasiyana. Nezve mutengo, ini ndinotaura zvakare kuti GarageBand yanga iri yemahara kwemakore kana uchitenga Apple chishandiso, asi haugone kuishandisa neimwe nzira. Iwe haubhadhare imwe yekuwedzera semakore mashoma apfuura. Hapachina.
Kune vamwe vese, ndinofara kuverenga vanhu vakambozviedza.
Microsoft yakagadzirira kuita kweEBFF yeWindows